मुटु चर्किने घटना रेकर्ड : माथिल्लो तलामा खुट्टा बाहिर, लिफ्ट र शरीर तल्लो तल झरिसक्यो ! – Annapurna Post News
मुटु चर्किने घटना रेकर्ड : माथिल्लो तलामा खुट्टा बाहिर, लिफ्ट र शरीर तल्लो तल झरिसक्यो !
June 23, 2022 sujaLeaveaComment on मुटु चर्किने घटना रेकर्ड : माथिल्लो तलामा खुट्टा बाहिर, लिफ्ट र शरीर तल्लो तल झरिसक्यो !
काठमाडौं । अहिले प्रायः सबैले लिफ्ट चढ्छन् । तर कहिलेकाँही सोच्नै नसक्ने दुर्घटना हुन्छ ।लिफ्टमा फसेर एक वृद्ध महिलाको खुट्टा भाँचिएको छ । छत्तीसगढको दुर्ग जिल्लामा भएको यो घटनाको दर्दनाक भिडियो पनि सार्वजनिक भएको छ ।
वास्तवमा लिफ्टमा एक खुट्टा राख्नेबित्तिकै लिफ्ट सुरु भयो, जसकारण महिलाको खुट्टा पाँचौं तलासम्म लिफ्टमा अड्कियो ।घटना जिल्लाको स्मृतिनगर प्रहरी चौकी भिलाई क्षेत्रको हो । महिलाको एउटा खुट्टाको हड्डी भाँचिएको छ भने अर्को खुट्टामा पनि गम्भीर चोट लागेको छ ।
पीडितका छोराले चौहान बिल्डकन व्यवस्थापनविरुद्ध स्मृतिनगर प्रहरी चौकीमा उजुरी दिएका छन् । उक्त घटना लिफ्ट सुरक्षाका लागि जडान गरिएको सिसिटिभीमा कैद भएको थियो ।जानकारी अनुसार पीडित ६० वर्षीया सावित्री देवीका छोरा सौरभ रञ्जनले आफ्नी आमा परिवारसँग लिफ्ट चढेको बताए । सौरभ आफैं, उनकी श्रीमती र छोरा लिफ्टमा चढे तर सावित्री देवी चढ्दै गर्दा लिफ्ट चल्न थाल्यो ।
लिफ्ट पाँचौं तलामा रोकियो । त्यतिन्जेल लिफ्टको ढोका बन्द भएको थिएन । भुइँ तल्लादेखि पाँचौं तलासम्म महिलाका दुवै खुट्टा लिफ्ट र पर्खालमा पुरिएका थिए । सो क्रममा सावित्रीदेवीको दुवै खुट्टामा चोट लागेको हो । लिफ्टमा रगत लतपत देख्न सकिन्छ ।सौरभले आमाको दुवै खुट्टा हटाउन खोजे तर सकेनन् । चौहान टाउन व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण लिफ्ट मर्मत नहुँदा एक्कासी लिफ्ट चल्न थालेको सौरभको आरोप छ । यो घटना तीन दिन अघिको हो ।
प्रहरीले जाहेरी दर्ता गरी कारबाही सुरु गरेको छ । दुर्गका प्रहरी उपरीक्षक अभिषेक पल्लभले महिलालाई रायपुर अस्पतालमा भर्ना गरिएको र बयान पनि लिइएको बताए ।
फेरि बयान लिने पनि उहाँले उल्लेख गरेका छन् । औद्योगिक सुरक्षाको टोलीले सुरक्षा मापदण्डका आधारमा अनुसन्धान गर्नेछ । रिपोर्ट आएपछि थप कारबाही हुनेछ ।
एसपीपीबारे चीनको प्रतिक्रियाः ढिलो आयो तर बोल्ड आयो
यी ५ सुगाले अश्लील गाली गर्न थालेपछी चिडियाखाना भयो बदनाम,सुगाहरुले चिडियाखानाको नाकनै काटिदिए ,
June 5, 2022 suja
दुलही लिन बेहुलाको साइकल सवारी : स्वास्थ्यपनि बन्ने, इन्धनपनि बच्ने सन्देश दिने सोच
June 22, 2022 suja
लोग्ने भनेको स्वा’स्नीको शरीर बलिया हुँदा मात्र आफ्नो हुने रहेछ